Ku xigeenka Xogayaha Guud ee QM oo ka warbixisay kulamadii ay la yeelatay farmaajo iyo Rooble. | Dayniiile.com:-wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Ku xigeenka Xogayaha Guud ee QM oo ka warbixisay kulamadii ay la...
Ku xigeenka Xogayaha Guud ee QM oo ka warbixisay kulamadii ay la yeelatay farmaajo iyo Rooble.
Previous articleMaxaa ka jira ‘inuu dhintay’ Mullah Abdul Ghani Baradar?
Next articleMadaxweynihii hore Soomaaliya Cabdi Qaasim Ayaa uga digay Farmaajo khilaafka”
Mohamed Abdullahi Mohamed - September 12, 2021 0
Xoghayaha caafimaadka ee Britain Sajid Javid, ayaa meesha ka saaray in baasaboorka tallaalka coronavirus lagu soo rogi doono England. Wuxuu BBC -da u sheegay inuusan...
Booliska Canada oo xiray rag ku eedeysan dilka wiil Soomaali ah
Senator Muuse Suudi “Warkeyga ma badnaan doono, waxa aan soo qabtay...